MyLingo101 - Sehatra fianarana fiteny
Mpampianatra amin'ny fiarahamonina
Lesona maimaim-poana sy maro hafa
Misoratra anarana / Midira Atombohy ny fampianarana
Manaiky aho ho any amin'ny politika fiarovana fiainan'olona
MIANATRA fiteny vaovao anio
Mpanafika, mpanelanelana na mandroso. Ho hitanao ny mpampianatra tonga lafatra!
fiteny Sinoa, mandarinanglisyfrantsayalemainagrikaItalianaAnaranaKoreanaportogeyEspaniola
Miteny ihany koa afrikaansSinoa, mandarinSinoa, Yue CantoneseanglisyfrantsayalemainagrikaHausaHindihongarianaItalianaAnaranaJavaneyKoreanaPersianinaportogeyMalagasy RomanianRosianaSerbo-KroatyEspaniolaThaiTiorkavietnamianaxhosaZulu
Lesona maimaim-poana sy bebe kokoa
Jereo ireo mpampianatra manolotra lesona fitsapana maimaimpoana, lesona ho an'ny ankizy, fanazaran-dresaka, fanomanana fanadinana ary maro hafa ....
MyLingo101 dia sehatra fianarana fiteny manerantany
Ireo mpampianatra anay dia avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay hiantoka fa afaka mahita mpampianatra mety indrindra ianao.
Mpampianatra lehibe antsikaLaharana ambony sy iraisam-pirenena
Avy amin'ny $ 15
Afrika atsimo, Cape Town
Mianara Koreana miaraka amin'ny Mpampianatra Julie * Koreana Teratany * Fampianarana * FUn / FUn *
Ny zavatra nolazain'ny mpampiasa anayManangona fanamarihana avy amin'ny mpampiasa anay izahay mba hahafahanao mahazo hevitra marina momba ny tena zavatra niainana amin'ny tranokalanay!
Madio sy mora mivezivezy ny tranokala, tsara sy manintona ny loko. Ny lesona atolotra dia mora ihany koa.
Mariana marfuz mpianatra
Sehatra mahafinaritra! Nofenoiko fotsiny ilay takelaka nifandraisako tamin'izay notadiaviko ary hitan'izy ireo ho mpampianatra mety indrindra aho nefa tsy mila manao fikarohana samirery.
John Smith mpianatra
"Fitiavana Mylingo101, ny zavatra rehetra ao amin'ny tranonkala dia mora azo ary ny fanohanana avy amin'ny admin dia tena mahavariana. Faly be aho fa hampianatra amin'ity sehatra ity!"
Ahoana no fiasan'izyDingana tsotra 3 hampianarana anao tsy misy tabataba na maika
Safidio ny mpampianatra anao
Mikaroha amin'ny lisitry ny lisitry ny mpampianatra ary mitadiava iray izay mifanaraka aminao amin'ny fotoana sy fiteny tianao.
Boky & karama
Raha vantany vao hitanao ny Mpampianatra anao dia mamandraha sy mandoa amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny processeur fandoavam-bola azo antoka.
Ataovy ny lesona
Mifandraisa amin'ny Internet amin'ny Mpampianatra anao amin'ny andro sy fotoana namandrihanao boky ary fenoy ny lesona.
Jereo ny tutorial haingana momba ny fomba hanombohana
Avelao izahay hanao ny asa ho anao!
Tsy mahita izay tadiavinao na tsy manam-potoana? Tsisy olana! Avelao izahay hanao ny asa ho anao! Alefaso aminay izay ilainao ary halefanay aminao ireo rohy mankany amin'ireo mpampianatra izay mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Lazao anay ny zavatra takinao: Inona no karazana lesona tadiavinao hananana? Fiteny inona? Te hanana mpampianatra teratany na tsy tera-tany ve ianao? Inona ny teti-bolanao handray lesona? Impiry ary amin'ny firy ianao no te hanana lesona?
Alefaso aminay ireto takiana ireto dia ho hitanay ianao mpampianatra tonga lafatra izay mifanaraka amin'ny takinao.
Midira fifandraisana miaraka aminay.
Antony tokony hianaranao anglisy
Ny teny anglisy dia teny iraisam-pirenena / manerantany Ny teny anglisy no fiteny be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao.
A VS. AN: rehefa mampiasa azy ireo
Mpanoratra Scribendi Ny valiny haingana: "A" na "an"? Mampiasà "A" Mampiasà "a" alohan'ny teny izay
NY lesoka 10 be mpankafy indrindra
Nosoratan'i Scribendi Soso-kevitra momba ny fanamboarana ny lesoka mahazatra ESL Andao hanome voninahitra aiza
Idioma sy andian-teny anglisy ampiasaina matetika
Mpanoratra Jimei Perry Resadresaka dia ho mankaleo tokoa raha tsy misy ireo! Raha izay no tianao
Hijery ny bilaogy
Sehatra lehibe handinihana fiteny iray izay safidinao. Mitadiava Mpampianatra, Mamandraha lesona ary manaova fotoana mahafinaritra ianarana miaraka aminay.
Tongava mpiaramiasa (Vaomieran'ny fiainana manontolo)
Ahoana ny fisoratana anarana sy famandrihana lesona
mailaka :: info@mylingo101.com
© mylingo101.com 2020 Zo rehetra voatokana.